Maxkamadda Ciidamada oo xukunay nin Laba Jeeble ahaa | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Maxkamadda Ciidamada oo xukunay nin Laba Jeeble ahaa
Maxkamadda Ciidamada oo xukunay nin Laba Jeeble ahaa
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta xukun adag ku riday nin horey uga soo goystay Ururka Al Shabaab, lana shaqeynayay ciidamada.
Ninkan oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Xasan ayaa horey isugu soo dhiibay ciidamada ku sugan Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, xilli muddo dheer uu ka tirsanaa Ururka Al Shabaab.
Farxaan Maxamuud ayaa la shaqeynayay Ciidamada Dowladda iyo Shabaabkii uu horeyba uga soo goystay, taasina waxaa soo cadeeyay Ciidanka Dharcadka.
Korneyl Cabdullaahi Buule Kamey, Xeer Ilaaliyada Guud ee Maxkamadda Ciidamada ayaa maalmo ka hor Maxkamadda ka hor sheegay in Farxaan Maxamuud uu weli ka tirsanaa maleeshiyada Al Shabaab, isla-markaana uu yahay Laba Wajiile.
Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida, Korneyl Xasan Cali Nuur (Shuute) ayaa Degmada Beled Xaawo kaga dhawaaqay xukun xabsi daa’in ah, oo ninkaasi lagu xukumay. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ciddii aan xukunkaasi ku qanacsanayn uu u furanyahay rafcaan muddo bil ah.
Maleeshiyada Al Shabaab ee isu soo dhiiba Ciidamada Dowladda ayaa waxaa qaarkood dib laga ogaadaa inay weli la shaqeynayeen maleeshiyada Al Shabaab. Qaarkood inta aysan dib ugu laaban Shabaabka waxay gaystaan dilal iyo qaraxyaba.
Ragga noocaani oo kala ah ayaa waxaa loogu loo yaqaanaa amaba loogu yeeraa Laba Sim Card-le oo ka dhigan (Laba Jeeble).